Sorohy ny olana rehefa mandrafitra pendrive miaraka amin'ny FAT na exFAT | Avy amin'ny mac aho
Mamolavola kapila tselatra miaraka amin'ny rafitra FAT na exFAT
Raha nanontany ahy ianao hoe inona ny endrika tonga lafatra ho an'ny kapila azo esorina, tsy maintsy mieritreritra ny valinteniko aho ary hiafara amin'ny famoronana endrika hafa: Mety tsara amin'ny inona? Azo antoka fa hamaly ahy izany ianao raha hitahiry angona, fa ny tiako holazaina dia hoe aiza no hampiasana solosaina pendrive. Ny olana dia misy Mac, Windows ary Linux ary tsy izy rehetra no mahay mamaky teny na manoratra amin'ny endrika rehetra. Inona no misy endrika roa manerantany: FAT sy exFAT.
Ka inona no tolo-kevitro? Azoko tsara izany, saingy mila manazava kely etsy ambony isika hoe inona ny endrika tsirairay. Raha hampiasa a pendrive amin'ny solosaina rehetra Na inona na inona rafitra misy anao, tsy misy dikany ny mamolavola ny kapila amin'ny endrika tsy tohanan'ny iray amin'izy ireo. Etsy ambany no hanazavana ny ampiasaina amin'ny endrika tsirairay.
1 Karazana endrika
2 ExFAT na NTFS
3 Ahoana ny famolavolana pendrive amin'ny exFAT
Ny format NTFS (New Technology File System) noforonin'i Microsoft tamin'ny taona 1993 ho an'ny rafitra fiasa. Raha tsy mandeha amin'ny antsipiriany be loatra isika dia mila mitadidy fa Mac OS X dia afaka mamaky, fa tsy manoratra, amin'ny kapila voahodina amin'ny NTFS. Raha tsy mametraka fitaovana an'ny antoko fahatelo isika dia tsy ho afaka mamolavola pendrive amin'ny NTFS avy amin'ny Mac ary, raha te hampiasa azy io amin'ny solosaintsika isika nefa tsy mila mametraka rindrambaiko izay tsy ilaina (araka izay hazavainay manaraka), tsara kokoa ny tsy mamolavola ireo kapila peninay amin'ny NTFS.
Raha aleonao ny mampiasa ny endrika NTFS dia tsy maintsy fantatrao fa misy fitaovana avy amin'ny antoko fahatelo manome ny OS X fahaizana mamaky teny sy manoratra amin'ny NTFS, toy ny Paragon NTFS na Tuxera NTFS. Saingy, manitrikitrika aho, tsy mendrika izany raha raisintsika fa misy endrika hafa manerantany.
Ny NTFS dia miasa tsara amin'ny kapila mafy amin'ny solosaina mampiasa Windows ho toy ny rafitra miasa.
Raha fintinina dia azontsika lazaina izany Mac OS X Plus Mitovy amin'ny NTFS izy io, fa amin'ity tranga ity, ny zava-drehetra dia natao ho an'ny rafitra miasa ao amin'ny birao Apple. Raha manana pendrive izay hampiasaintsika amin'ny Windows koa izahay dia tsy mendrika ny hamolavola azy amin'ny Mac OS X Plus satria tsy ho afaka hiditra amin'ny angon-drakitra izany. Aleo mampiasa ny iray amin'ireto safidy roa manaraka ireto.
Mac OS X Plus tsy tokony hampiasa afa-tsy amin'ny kapila mangirana izay hametrahana ny OS X.
Namorona ny kinova voalohany tamin'ny taona 1980 ary ny farany (FAT32) tamin'ny 1995, dia azo lazaina fa ny FAT (Tabilao Allocation File) no rafitra fisie manerantany indrindra. Azo ampiasaina na dia amin'ny fitaovana toy ny console, finday sns aza, saingy manana olana lehibe izy raha tsy amin'ny solosaina birao ihany no tiantsika hampiasa azy: ny ambony indrindra tohanan'ny FAT32 dia 4GB. Raha ohatra ka manana horonantsary 5GB sy pendrive miendrika FAT isika dia hanana safidy roa: na zarao ho roa ny fisie na avelao amin'ny toerana nisy azy io satria tsy ho azontsika atao ny mametraka azy ao amin'ny Pendrive.
Araka ny nolazaiko tetsy ambony, ny FAT, FAT16 ary FAT32 dia tsy tokony hampiasa afa-tsy amin'ny kapila azo esorina izay tiantsika hampiasa, ohatra, amin'ny Sony PSP na fahatsiarovana ho an'ny fakantsary.
Farany manana ny endriny izahay exFAT (Tabilao fizarana rakitra mitatra), ny fivoaran'ny FAT32. Noforonin'i Microsoft ihany koa izy io ary mifanentana amin'ny Snow Leopard mandroso ary manomboka amin'ny XP, saingy misy ny tsy fitoviana lehibe amin'ny kinova teo aloha, toy ny haben'ny rakitra ao amin'ny exFAT izay 16EiB. Tsy misy isalasalana fa Ny safidy tsara indrindra Raha te hampiasa pendrive amin'ny solosaina Windows, Mac sy Linux isika, na dia tsy azo ovaina aza ity farany raha tsy mametraka rindrambaiko.
Hampiasa exFAT izahay handrafetana ireo kapila mafy na pendrive tadiavinay ampiasao amin'ny ankamaroany amin'ny Mac sy Windows. Raha tsy maintsy ampiasaintsika amin'ny fitaovana toy ireo konsol na fakantsary voalaza etsy ambony ireo dia tsy hampiasa an'io endrika io izahay.
ExFAT na NTFS
Raha misalasala ianao eo anelanelan'ny ExFAT na NTFS, miorina amin'ny zavatra vao hitantsika, ny zavatra lojika indrindra dia ny famolavolana singa fahatsiarovana pendrive na ivelany amin'ny endrika ExFAT satria io no safidy manome antoka ny mifanentana tsara indrindra, mifanaraka amin'ireo rafitra miasa rehetra ankehitriny.
Ahoana ny famolavolana pendrive amin'ny exFAT
Ianareo izay mbola tsy naheno an'io endrika io dia aza matahotra. Ny famolavolana kapila mafy, pendrive ivelany na USB amin'ny Mac dia tsotra be ary tsy miova firy ny fizotrany raha toa ka izay no tadiavintsika dia ny mamolavola azy amin'ny exFAT. Saingy, hialana amin'ny fisavorovoroana dia hataoko amin'ny antsipiriany ireo dingana:
Tokony hosokafantsika ny Fitaovana kapila. Misy fomba telo samihafa hidirana ao aminy: avy amin'ny Launchpad, izay anananao ao amin'ny pikantsary, miditra ny folder Applications / Other / Disk Utility na, ny tiako indrindra, avy amin'ny Spotlight, izay azoko amin'ny alàlan'ny fanindriana azy io Time the CTRL + Spacebar bokotra.
Raha vantany vao ampiasaina amin'ny kapila ianao dia hahita sary toa ilay iray voasambotra isika. Kitiho ny tarika misy anay. Tsy misy tsindry izay ao anaty kapila. Izay no fisarahana tokana misy, ka maro no hiseho raha manana fizara misimisy kokoa isika. Koa satria izay tadiavinay dia ny mamolavola ny zava-drehetra, dia mifidy ny faka.
Manaraka, tsindrio ny Delete, izay mitovy amin'ny endrika amin'ny Windows.
Mamelatra ny menio izahay ary misafidy exFAT.
Ary farany, tsindrio eo amin'ny «Delete».
Tsy nandrafitra na inona na inona tao amin'ny NTFS efa ela aho. ExFAT no endrik'ireo drive ivelany rehetra ary ankehitriny dia afaka manao toy izany koa ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » OS X Mountain Lion » Mamolavola kapila tselatra miaraka amin'ny rafitra FAT na exFAT
Antonio Castellano dia hoy izy:
Tena nazava tamiko izany. Manomboka izao dia ho afaka hampiasa ilay pendrive amin'ny rafitra fiasa samy hafa miaraka am-pilaminana aho. Lahatsoratra tena tsara nataon'i D. Pedro Rodas.
Valiny tamin'i Antonio Castellano
Misaotra anao, Antonio. Manentana anao aho hanaraka ny lahatsoratro.
Ernesto Gonzalez dia hoy izy:
Misaotra, tsara ny tendrony ary tena ilaina ho an'ny olona manana olana amin'ny fandrafetana.
Valiny tamin'i Ernesto González
Salama, rahampitso tolakandro, avy any Mexico, manana kapila mafy aho ary tiako hamafana sy hamolavola azy ho an'ny mac sy windows, fa amin'ny mac kosa tsy miseho ny endrika EXFAT, hanome azy io endrika io rehefa mampifandray ny kapilaiko ivelany aho = , manome ahy endrika mac mac ihany io
Manantena aho fa afaka manampy ahy ianao. arahabaina
Misy zavatra tena mahaliana momba ny famolavolana kapila ivelany ao amin'ny exFAT dia ny OS X dia afaka manondro izany ary mamela ny fikarohana haingana amin'ny Spotlight.
Misaotra tamin'ny fandraisana anjara Héctor.
Iray amin'ireo tombony lehibe azo avy amin'ny endrika exFat. Misaotra Hector!
antonioquevedo dia hoy izy:
Ny zavatra tokana hotadidina dia ny exFat tsy mifanaraka amin'ny Windows XP, na dia misy patch ho azy aza.
Mamaly an'i antonioquevedo
Atonio tokoa, Windows XP dia mila fanavaozana hahafahana mitantana ireo rakitra exFAT, izay azonao sintonina avy. Misaotra tamin'ny hevitrao.
Mahomby. Mila misintona patch ianao mba hihazakazahany. Misaotra amin'ny fidirana!
Sajo dia hoy izy:
Handrafetako HDD ivelany ivelany 1TB ny endrika exfat, inona ny haben'ny fizarana habe omeko azy?
Mamaly an'i Sajo
Hampiasa rakitra be ve ianao? Raha tsy izany dia atoro anao ny famolavolana azy amin'ny MS-DOS mba hifanaraka amin'ny Windows sy OSX ity kapila ity.
Walter fotsy dia hoy izy:
Manana ahiahy mitovy amin'ny namanao aho
Valiny tamin'i Walter White
Isis dia hoy izy:
Ny hany zavatra ratsy dia ny fihenan'ny famindrana dia nilatsaka betsaka, nanomboka ny 15 minitra ka hatramin'ny 25 tao anaty rakitra 7-zavatra GB):
Valiny tamin'i Isis
Marina ny anao momba izany. Milatsaka be ny hafainganam-pandehan-javatra
Fantatrao ve ny antony ilana ahy mihoatra ny 25 minitra?
ary raha manana ios teo aloha ianao toy ny amiko dia manana 10.5.8 ??? Misy rindrambaiko ve ??
Josele dia hoy izy:
Aorian'ny fanomezana ity formata ity dia AZA ATAO REHETRA NY USB-TV ... ¿? ¿? ¿? ¿?
Mamaly an'i josele
tramusoche dia hoy izy:
Tahaka an'i Josele, raha vantany vao nokasaina ho an'ny Exfat ilay kapila mafy Toshiba 1TB, fantatry ny solosaina roa tonta izany, afaka mamonjy ny sarimihetsika mihoatra ny 4Gb aho, saingy tsy eken'ny fahitalavitra LG izany, izay ahitako ny sarimihetsika amin'ny feo ny rafi-peo sy ny efijery misy kalitao tsara. Tsy hitako izay hatao, na ny misintona ireo sarimihetsika amin'ny solosaina findainy, na tsy hitako izay hatao mba hanaiky ny fahitalavitra azy.
Te hamaha izany aho satria tsy afaka mampiasa ny iMac hisintomana satria tsy afaka apetrako amin'ny fahitalavitra izany… Ary tsy ny fividianana Apple TV hijerena azy ireo no vahaolana satria manana ny kapila mangidy amin'izany aho.
Misy olona manana TV LG42LB630V na mitovy aminy ve ary milaza amintsika ny fomba namahany azy?
Mamaly an'i tramusoche
tapedocom dia hoy izy:
Mitovy toerana amin'ny mpiara-miasa amiko aho, ilay maodely LG TV iray ihany ary tsy mamela ahy hilalao na inona na inona avy amin'ny pendrive.
Heveriko fa hisy vahaolana hafa ankoatry ny appleTV na tsy mila mitady rafitra windows fotsiny ho an'ity.
Mamaly amin'ny tapedocom
Vahao izany amin'ny alàlan'ny fampiasana kapila mangarahara multimedia na pendrive hijerena sarimihetsika amin'ny fahitalavitra, ary ferana ny fampiasana ny kapila mafy ataonao mba hanaovana backup, na ny mifamadika amin'izany.
Heveriko fa raha mampiasa ny kapila mafy ivelany ianao amin'ny alàlan'ny famolavolana rehetra dia ho vitsy kokoa izany. Ny fitahirizako azy fotsiny no ampiasako azy.
Manana ny DD ivelany ao amin'ny ExFat aho ary manana haino aman-jery nomerika tandrefana (tsy misy kapila mafy anatiny, ny tranga fotsiny) hijerena zavatra amin'ny fahita lavitra. Mampifandray ny DD amin'ny haino aman-jery aho ary tsy mahita na inona na inona mihitsy aho. Ny zavatra ratsy indrindra dia ny fanandramako azy tamin'ny haino aman-jery avy amin'ny fianakaviako sy ny namako ary mbola ampiasaiko ihany.
Ny mombamomba anao ExFat dia tena nilaina tamiko hitantanana ny kapila ext Toshiba ao amin'ny Win sy Osx
kitus77 dia hoy izy:
Ho an'ny LG TV, azonao atao ihany koa ny mijery azy amin'ny alàlan'ny fizarana amin'ny haino aman-jery, mametraka ny Universal Media Server amin'ny solosainao ary mijery azy amin'ny alàlan'ny streaming.
Valiny amin'ny kitus77
Mazava be ny mombamomba anao ary tena nilaina tamiko. saingy manana olana aho, manana kapila mafy ivelany ao amin'ny FAT32 aho, fa rehefa te hamafa rakitra aho dia mitondra azy ireo any amin'ny fako fa tsy hamela ahy hanafoana ny fako satria milaza fa tsy manana alalana ilaina aho. Tsy haiko ny manao an'io, ny fampahalalana momba ny kapila mafy dia milaza amiko fa azo vakiana sy soratana izy io. Misaotra indrindra anao
Salama, ary miaraka amina endrika fisie rakitra matavy afaka mampifandray ny kapila ataoko amin'ny fahitalavitra na trano fanaovana teatra hijerena sarimihetsika aho ary mamaky ara-dalàna izany? Mampiasa windows sy osx el capitan aho
Ramiro Fernandez llano dia hoy izy:
Salama, format avy amin'ny MAC amin'ny exFat, saingy na izany aza tsy hitan'ny windows izany. Mamolavola amin'ny windows amin'ny exFat aho, saingy mamorona partition kely 200 MB tsy misy zavatra hafa! TSY hitanao ny 15800MB ambiny amin'ny pen 16GB, maninona no mitranga izany? Misy rindranasa hanao format ambany amin'ny MAC?
Valiny tamin'i Ramiro Fernandez llano
andramo miaraka amin'ny rafitra fisarahana MBR rehefa omenao azy ny endrika vaovao (safidio ny kiheba ambany noho ny endrika exFAT)
fitsapana miaraka amin'ny rafitry ny rakitsoratra master MBR
Antonio Salcedo Gonzalez placeholder image dia hoy izy:
Ramiro toa izany koa no mahazo ahy, azonao vahana ve?
Valiny tamin'i Antonio Salcedo Gonzalez
Ny olako dia ny exFAT tsy hitan'ny tv .. Misy mahalala?
Salama Manana televiziona LG aho ary efa niasa ny drive ivelany nataoko exFAT fa mbola tsy eken'ny tv ... Misy hevitra ve? Misaotra anao.
Ataoko izany ary amin'ny windows dia tsy mahalala afa-tsy ampahany amin'ny 200 MB aho ary milaza amiko fa mila mamolavola endrika indray aho!
Salama, manana MacBook Pro aho, mamolavola ny pendrives-ko ao amin'ny MS-DOS FAT hahafahako mihaino mozika amin'ny fitaovan'ny feo mp3 fa misy tsy mahalala azy ireo, inona no atoro anao, ho noho ireo fizarazaran-tany ireo? Ny zavatra hafahafa dia ny nihainoako azy ireo tamin'ny fitaovana SONY ary avy eo nandefa mozika bebe kokoa aho ary ireo fitaovana ireo dia tsy mahafantatra azy ireo. Misaotra anao!
MANKASITRAKA AN'ILAY INFO ANAO, FA MANKASITRAKA ANAO IANAO: RAHA Te-HAMORATRA PENDRIVE 16 GB SY 3.0 aho. RAHA Mampiasa NTFS eto ambany aho, dia manome ahy safidy isan-karazany ao amin'ny «ALLOCATION UNIT SIZE», NANANAN'NY BYTES 4096 DEFA. TSY HANFIDY KILOBYT 16 aho? MANKASITRAKA.
Filomaki dia hoy izy:
Salama, tiako ny anampianao ahy .. jereo raha efa nanjo anao izany ary nanandrana tamin'ny endrika fisie rehetra aho ary rehefa napetrako tao anaty fiara dia manome ahy hadisoana ny usb, misy mahalala ve amin'ny endrika hamolavolana azy ?
Valiny tamin'i Filomaki
Ny fanazavana mazava, feno indrindra, ilaina ary tsotra! Tena nanampy be ahy izany! Misaotra anao
martuca dia hoy izy:
salama, rehefa ataoko io dia mamafa ny atin'ny kapila ivelany ve? misaotra
Mamaly an'i martuca
carlosrubi dia hoy izy:
Mamaly an'i carlosrubi
Nohavaoziko tamin'ny mac OS SIERRA fotsiny ny mac-ko ary rehefa mandika mozika amina pendrive aho dia tsy maneno amin'ny mpilalao mozika rehetra, fafana izany amin'ny utilitaon'ireo kapila ao amin'ny EX FAT ary tsy maneno koa izany, inona no azoko atao, hatrizay niasa tsara ho ahy izany
Manantena fanampiana aho, misaotra anao
Ahoana, efa namaky ny lohahevitra iray manontolo aho tena tsara noho ny fampahalalana tena tsara, amin'ny zavatra niainako dia hiteny ny hevitro aho satria sendra toe-javatra mitovy amin'ny Windows, Mac, Smartv.
Ny Smartv, ny endriny saika novakian'izy ireo dia ny NTFS na FAT, ny antsipiriany dia ny sarimihetsika izay ahitsian'ny olona iray manana kalitao tsara dia mihoatra ny 4 gig noho ny endrika FAT, ny rakitra lehibe kokoa noho ny 4 gig dia tsy azo atao.
Mac ny format NTFS no vakiana fotsiny, fa raha manana kapila ho an'ny sarimihetsika ianao dia afaka milalao azy fa tsy manampy / mamafa rakitra.
Ny ataoko dia: Manana kapila ivelany misy partition 2 aho.
Ny fizarazarana voalohany lehibe indrindra amin'ny NTFS sy Manan-danja fa izy no voalohany ka ny Smartv dia mahatsikaritra azy ho ara-dalàna ary afaka mahita ny sarimihetsika.
Ny fizarana faharoa exFAT kely kely noho ny fampiasako azy amin'ny MAC na Windows izay anaovako backup na fifanakalozana rakitra Ary noho izany ny rafitra miasa 2 dia afaka mamafa / mamaky rakitra tsy misy olana, Ary koa miaraka amin'ny fizarazaran'ny NTFS dia azoko atao ny manampy / mamafa ny sarimihetsika ary mijery azy ireo tsy misy olana amin'ny Smartv.
Ny kapila ampiasako dia 1 Tera ary manana fizara voalohany aho manodidina ny sarimihetsika NTFS miisa 700 gig ary fizarana faharoa 300 gigs eo ho eo exFAT ho an'ny backup tahiry sns.
Safidy tsara, ny hany zavatra dia raha mampidina sary mihetsika amin'ny mac-nao ianao dia tsy afaka mamindra azy ireo amin'ny kapila ivelany ao amin'ny partition exFat fotsiny, satria ao amin'ny fizarazarana NTFS dia vakiana fotsiny, noho izany dia afaka mahita azy ireo eo fahitalavitra marani-tsaina avy amin'ny LG dia mila pc Windows ianao hamindrana ireo sarimihetsika avy amin'ny partition exFat mankany amin'ny NTFS ...
Na ahoana na ahoana, misaotra an'ity hevitra ity 😉
Freddie gonzalez cortez dia hoy izy:
Mividiana flash USB USB FLASH DRIVE 2.0 128 Gb dia milaza fa fonony fa mifanaraka amin'ny windows, manana windows 7 professional aho, ity pendrive ity raha mamaky ny teny hoe files, excel nefa tsy milalao ny horonan-tsary na ny film mihevitra fa mitahiry izy ireo ary mandray toerana izy ireo, noho izany eo amin'ny pendrive izany fa tsy milalao horonantsary koa amin'ny WMV sy VLC.
Azonao atao ve ny manampy ahy azafady?
Valiny tamin'i Freddie Gonzalez Cortez
Salama tsara, jereo, nividy kapila mafy 3tb Toshiba aho ary rehefa ataoko amin'ny FAT irery dia mitazona ny 3Tb fa rehefa apetrako amin'ny Ex-Fat dia lazainy amiko fa 800Gb ny toerana misy, inona no azoko atao?
Salama salama, manana mpilalao haino aman-jery aho, ary rehefa nofafako ireo horonantsary nananako dia tsy fantatro izay nataoko na ny zava-nitranga izao satria tsy fantatry ny mpilalao aho, misy olona afaka miteny amiko izay tokony hataoko mba hamerenana azy io, Nandany pendrive koa aho, misaotra.
Salama, hey, manana olana aho, angamba tsy azoko tsara na tsy fantatro, fa namboariko tamin'ny Ex-Fat ny USB ary ankehitriny tsy misy na iray aza amin'ireo rafitra miasa mahita azy ... raha azonao lazaina amiko ny antony , Tena tiako izany.
Tsy maintsy mamolavola kapila ivelany aho, ary rehefa misafidy exFAT amin'ny varavarankely aho dia mamela ahy hisafidy 128 kilobytes ka hatramin'ny 32768, iza amin'ireo no atoro anao hisafidy ny hanatsara ny habakako amin'ny faratampony?
formatie pendrive miaraka amin'ny exfat extension fa ny windows windows dia tsy mahalala ahy, ahoana no fomba hamahako azy sa inona izany?
Fabian A. dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara ho antsika izay tsy mahalala firy ireo zavatra ireo.
Valiny tamin'i Fabian A.
JAVIER MARTINEZ dia hoy izy:
Nanavao ny Imac ho Ox High Sierra aho. Tsara daholo raha ny fitsipika no jerena. Saingy rehefa mampiasa pendrives sy kapila ivelany izay efa namboariko tao amin'ny FAT32 hampiasa izany amin'ny rafitra fiasa rehetra, tsy mamela ahy handefa rakitra mihoatra ny 2GB izy io mandra-pahatongan'izany dia namela ahy handefa rakitra hatramin'ny 4GB. Nandeha lavitra mihitsy aho mba hanavaozana azy io avy amin'ny Disk Utilities, saingy ny olana dia mitohy. Tsy haiko raha olon-kafa no mitranga mitovy ary tsy afaka mamaha izany aho.
Valio amin'i JAVIER MARTINEZ
Ry Javier tsara, nahita ny vahaolana ve ianao? Toy izany koa no mahazo ahy ary tsy hitako izy, misaotra.
Jose Luis Picazo Cantos dia hoy izy:
Toy izany koa no mitranga amiko, niantso ny AppleCare Protection Plan aho fa tsy misy hevitra ry zareo. Koa satria manavao ny macOS High Sierra 10.13.2 aho dia tsy afaka mandika rakitra mihoatra ny 2GB ao amin'ny Fat32.
Valiny tamin'i José Luis Picazo Cantos
Ry Javier tsara, zavatra mitovy amiko no mitranga amiko ary tsy manana vahaolana aho, afaka manampy antsika ve ny olona?
Manana kapila ivelany roa aho: ny iray ao amin'ny FAT32 ary ilay iray izay efa namboariko ho exFAT. Mampiasa Mac sy Windows aho ary tiako ny hamindra info sy hijery sarimihetsika ireo kapila.
Ny olako fotsiny dia rehefa mandika fampahalalana amin'ny kapila aho ary mamafa azy avy eo dia TSY MISAFATRA ny fahafahan'ny kapila, dia manondro ahy hatrany ho 50gb "Nampiasaina" na dia mamafa ny sarimihetsika aza aho, ka very ny kapila betsaka. Misy olona afaka milaza amiko ve izay tokony hatao sy inona no tokony hataoko? Misaotra indrindra anao!
Nividy Mac aho ary namolavola kapila mafy roa ho an'ny ExtFat ary izao dia tsy mamaky azy ireo ny Samsung TV. Nisy nahavita nanamboatra azy ve?
Iñaki Goñi Salort dia hoy izy:
Ianao dia nanao izay hahazoana antoka fa hanafoana ny fako amin'ny Mac miaraka amin'ny Disk mifandray. Ao amin'ny Mac Os, raha mbola tsy foinao ilay izy, dia mijanona ao anaty kapila mandra-pahafoanao azy ny tahirin-kevitra voafafa izay "ao anaty fako". Ao amin'ny Windows, rehefa mamafa amin'ny kapila ivelany ianao dia mamafa "definitively".
Mamaly an'i Iñaki Goñi Salort
Manana ireo olana ireo aho + tsy fitoviana amin'ny windows sy linux na dia ExFat na Fat32 aza aho ary tsy mamela ahy hisaraka ihany koa. Vao haingana aho no nanavao ny PowerPC G5 taloha (mankany Leopard avy amin'ny tigra miaraka amina pendrive) ary mampiasa azy io fotsiny aho mba hampisarahana sy handrafetana ireo pendrives izay nijanona tsy mandeha tsara intsony. Amin'izao fotoana izao dia avy amin'ny powerPc na avy amin'ny Linux (gparted…) fotsiny no anaovako izany, samy mamela ahy Fat32 fotsiny fa tsy ExFat.
Salama, namolavola ny kapila tselatra USB tamin'ny endrika ExFat fotsiny aho kanefa ireo rakitra miaraka amin'ny fanitarana mp4 na .fat dia tsy mamela ahy handika-paste. Macbook Pro ny masinina ... Inona no azoko atao?
Inona no schema ary inona no ilana azy? Ary inona no tetik'ady raisintsika rehefa mamolavola penina amin'ny exFAT?
Salama daholo, miaraka amin'ny NTFS azoko atao ny miaro ny USB misy alàlana ara-piarovana, saingy amin'ny rafitra xfat dia tsy afaka manome fiarovana ny USB aho, misy mahalala ve ny hanome fiarovana ny rafitra xfat ???
Rihana fahatelo dia hoy izy:
Salama, misaotra anao noho io fanazavana feno io. Fa izao. Manana format usb 3.0 ho exFat aho, miaraka amin'ny fisie .avi sy .mkv, ary manandrana mijery ireo sarimihetsika amin'ny bluray aho, ary tsy fantany izany.
Mamaly an'i TercerPalenta
AngelP dia hoy izy:
Miarahaba, azo atao ve ny mamorona MAC na Windows OS PenDriver azo ampiasaina amin'ny alàlan'ity endrika exFAT ity? Raha te-hamorona boot DOS ao Pendrivar ho an'ny Windows 7 isika, tohanana partitions exFAT ve izany?
Valiny amin'i AngelP
Kevin garcia dia hoy izy:
Manana olana izay tsy hitako ny fomba hamahana azy:
Manana usb 64gb aho, fa noho ny antony iray dia tsy mamolavola azy amin'ny 300mb amin'ny endrika fat32 fotsiny ny solosaina windows.
izao dia mac, manao toy izany amiko tsy haiko hoe maninona, na dia 64gb aza izy ireo dia mamolavola 300mb fotsiny ary mamela ny ambiny ho foana.
Izaho izao dia manana olana matotra kokoa, format izay usb amin'ny maody ASFP ary raha mila ilay 64gb izy, ny zavatra ratsy dia tsy manana safidy hiova amin'ny fomba hafa hiverina amin'ny exfat intsony aho izao, maninona ?????
Valiny tamin'i Kevin Garcia
HomePod firmware dia manambara ny Apple TV miaraka amin'ny fanohanana 4k amin'ny HDR 10 sy Dolby Vision
Ny fotoana fandefasana AirPods dia ahena ho 4 herinandro